Itoobiya: Madaxbannaanida iyo qarannimada Soomaaliya ma faragelineyno - BBC News Somali
Image caption Soo dhaweyn ballaaran ayaa loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya
Dhawaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Booqashadan oo ahayd tii ugu horreysay tan iyo markii la doortay ayay dad badan oo Soomaali iyo ajanabi ahba aad u hadal hayeen maadaama madaxweyne Farmaajo loo arkayay in uusan xiriir wanaagsan la lahayn deriskiisa Itoobiya.
Farmaajo ayaa loo arkayay in uusan ahayn dooqa Itoobiya xilligii ay socotay doorashadii Soomaaliya, waxaana guushiisa markii dambe loo aaneeyay xamaasad waddaniyad ku dhisan oo laga dhex dareemayay shacabka Soomaalida.
Soomaali badan ayaa rumeysnayd in madaxweynaha cusub uu yahay waddani isla markaana uu wax ka qaban doono faragelinta dalka ku hayaan waddamada deriska ah, iyaga oo si gaar ah farta ugu fiiqayay Itoobiya.
Sidii madaxdii hore ee Soomaalida, Farmaajo safarkiisii ugu horreeyay ee dibadda kama uusan billaabin dalka Itoobiya, arrintaa oo ay u riyaaqeen dad badan. Balse dadka qaar ayaa u arkayay in madaxweynuhu ay tahay in uusan iska indha tirin saameynta Itoobiya ku leedahay arrimaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo ay booqashadiisa ku wehliyeen mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay ra'iisalwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desaleng. Soo dhaweyntaasi oo ka duwaneed sidii loo soo dhaweyn jiray madaxdii ka horreysay Farmajo ayay dad badan u arkaan inay furtay bog cusub.
Kulanka labada mas'uul ayaa ahaa mid arrimo badan laga wada hadlay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ahaa iskaashiga dhanka ammaanka ee labada dhinac .
Ciidammada Itoobiya oo ka baxay Ceel Cali
Sida laga arkay muuqaal lagu baahiyay barta intarneedka ee madaxtooyada Soomaaliya, ra'iisalwasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in isaga iyo Farmaajo ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaayeen horumarka dhaqaale ee labada waddan iyo in wax laga qabto arrinta abaaraha oo uu sheegay in dhibaatada ugu xoogan ay haysato Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya, Yusuf Garaad ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhoweyneyso horumarinta gobol kasta oo Soomaaliyeed, wuxuuse sheegay inay Itoobiya u sheegeen in loo baahan yahay 'in aan horumarintaasi aanay noqon mid wiiqi karta Madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka'.
Ra'iisal Wasaaraha itoobiya Hailemariam Desaleng ayaa carabka ku adkeeyay in Itoobiya ay aqoonsan tahay madaxbannaanida iyo wadajirka dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in Dowladdiisa ay arrimaha siyaasadda dibadda ee Soomaaliya ay si toos ah ugala xiriiri doonto dowaldda federaalka.
Dowladda Itoobiya ayaa qeyb ka ah dalalka ku tabarucay ciidammada Midowga Afrika ee AMISOM. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay Itoobiya waxay ciidammadooda baneeyeen goobo muhiim ah oo qaarkood ay la wareegeen kooxda Alshabaab.
Waxaa u dambeysay oo ay ka baxeen bishii la soo dhaafay Ceelbuur ee gobolka Galmgaduud oo ay gacanta ku hayeen muddo 3 sano ka badan.
Waxay sidoo kale horay u baneeyeen oo ay Shabaabku la wareegeen Halgan, Ceel Cali, Moqokori,Rabdhuure, Buur dhuxunle, iyo Garasweyne iyo deegaanno kale.
Itoobiya waxay sheegtay in ciidammada ay la baxday aysan qeyb ka ahayn AMISOM, mana cadda qorshaha ay markii horaba ku joogeen.
Al Shabaab oo dib u qabsaday Ceelbuur oo ay ka baxeen ciidammada Itoobiya
Desaleng, waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay taageero caalami ah sidii ay u hanan lahayd amniga dalka oo ah waajibaadka dowlada Federaalka.
Arrinta kale ee aadka u soo jiidatay Soomaalida ayaa ahayd madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya iyo faragelinta Itoobiya ee arrimaha Soomaaliya.
Ra'iisalwasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in waligood aysan gacan dhaafin dowladda Federaalka, waxa uuna intaasi ku daray in markastaa oo ay doonayaan in ay la macaamilaan maamul goboleedyada ay ruqsad ka qaadan jireen dowladda Federaalka.
Waxa uu sheegay in isagu laf ahaantiisa uusan u dul qaadan karin in loo gacan dhaafo maamullada dalkiisa, oo iyaga si toos ah loola macaamilo.
''Iyadoo aan oggolaansho ka helin dowladda federaalka ee Soomaaliya, Itoobiya iyo waddan kale toona ma ahan inay farageliyaan madaxbannaanida iyo qarannimada Soomaaliya. Waxaan filayaa inay arrintani caddahay. Anigu qof ahaan ma aqbali karo in waddanna uu si toos ah u soo fara geliyo arrimaha dalkeyga isagoo aan oggolaansho iga haysan, Soomaaliyana waa sidaas oo kale,'' ayuu yiri ra'iisalw asaraaha Itoobiya.
Image caption Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisal wasaare Desaleng, ayaa si wada jir ah u qabtay shir jaraa'id
''Socdaalka Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu ku tegey dalka Ethiopia wuxuu dhabbe u falay wada shaqeyn iyo iskaashi nooc hor leh oo wanaagsan oo dhex mara Soomaaliya iyo Ethiopia kaas oo ku qotoma is qaddarin iyo wada faa'iideysi siman'', ayuu yiri wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya Yusuf Garaad
Balse Dr Cabdiwahaab cabdisamed oo ka faalooda arrimaha Afrika ayaa sheegay in Itoobiya looga baahanyahay inay la timaado ficil waafaqasan hadallada ka soo yeeray.
Waftiga labada dal ayaa ku heshiiyay in la abuuro guddi ka kooban labada dhinac oo ka shaqeyn doono fulinta waxyaabihii ay madaxda ku heshiiyeen.